Wedzera Blog Traffic nekumutsidzira Old Blog Zvinyorwa | Martech Zone
Wedzera Blog Traffic nekumutsidzira Old Blog Zvinyorwa
Chishanu, July 10, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe ini ndave pedyo ne2,000 blog zvinyorwa pa Martech Zone, hazvireve kuti kushanda nesimba kwese kwandadurura mune yega yega posvo kunozivikanwa. Vashoma vanhu vanozviziva, asi ivo is zvinogoneka kumutsidzira zvekare mablog mablog uye uwane mutsva traffic.
Vhiki rino chigadzirwa chitsva chakarova pamusika icho chinoshamisa pakumutsidzira zvekare mablog mablog. (Inogona zvakare kushandiswa pamapeji ewebhu, zvakare, ehe saizvozvo). SEOPivot inoongorora mapeji ewebhusaiti yako uye inokupa iwe nemazano ekushandisa mazwi akakosha ekutsvagisa injini yekutsvaga. Icho chigadzirwa chinoshamisira uye ndachiisa kuti ndishandise pane yangu bhurogu.
For $12.39, unogona kushandisa SEOPivot kwezuva rimwe - inopfuura nguva yakaringana yekupinda kusvika kumatunhu zana uye uwane rondedzero yakazara kumashure anosvika pamapeji chiuru nemazwi akakosha nemitsara. Iwe unogona kunyange kurodha zvabuda kuburikidza neExpcel Spreadsheet!
Ini ndakangorongedza rondedzero neUrl uye Avhareji vhoriyamu… ndiyo fungidziro kuverenga kwekutsvaga kweshoko rakapihwa kana chirevo. Ipapo ini ndakagadzirisa yega yega yemapeji kana zvinyowani, ndikawedzera musanganiswa wezwi rakakosha pazvinogoneka, uye ndikadhinda zvakare zvinyorwa. Izvo zviri nyore uye iwe unogona kuve nemhedzisiro yakakosha pamugwagwa.
Icho chigadzirwa chakakura uye yakanaka nzira yekumutsidzira zvimwe zvekare zvemukati izvo iwe zvawakaisa imwe simba mukuisa kunze uko!
Tags: 3mvumo.netbdailymhedzisiro yebhizinesiyekutsvaga injinitwitter kushambadzira matekinikitwitter mazano
ExactTarget Inotora Kwevatengi Sevhisi kumusoro Yakakura (Yemagariro) Notch
Mobile Indasitiri Inodziya Kumusoro
Jul 11, 2009 pa 10: 08 AM
Ndanga ndichitarisa muchigadzirwa ichi zvakare. Nekudaro, ini ndinofunga kuti iwe unogona kuwana zvirinani kutarisisa kwemawebhusaiti ako maitiro uchishandisa analytics uye tenga kukwenenzvera yako kiyi yekutsvaga pane adwords keywords chishandiso pane chaiyo match. Nekudaro, ini ndinofunga chigadzirwa ichi chaizoenderana nemuridzi weblog anongoda kuwedzera keyword rondedzero uye haana nguva yekuita KPI inoshuma keyword research.
Jul 11, 2009 na5:12 PM
Ndinobvuma zvakare: keyword analysis, Shout... Adwords yakanaka. SEOPivot's hanzvadzi chigadzirwa SEMRush inobatsira zvakanyanya zvakare - kunyanya pane yakaderera vhoriyamu, refu-muswe keywords. Adwords haina kunyanya kubatsira pane yakaderera vhoriyamu, yakakwirira-inoenderana mazwi dzimwe nguva.
Wakanzwisisa pfungwa yangu yakakosha - nekungogadzirisa zvimwe zvakapfuura uye kuwana kuwedzera kwakanaka kwetraffic, kudhawunirodha SEOPivot mushumo kunokurumidza uye nyore!
Jul 29, 2009 na2:53 PM
Ndinokutendai zvikuru nekuongorora! Isu tinofara kuona kuti chishandiso chedu chinobatsira kune nyanzvi 🙂 Icharamba ichivandudza sevhisi uye tinovimba kuti ichave yakanyanya nyore uye inobatsira.
Nov 16, 2009 na5:01 PM
Great post. Unganetseka here kana ndikanyora chinyorwa chidiki pane yangu yekuwedzera webhusaiti traffic blog nezve izvi?
Blog rangu richiri nyowani saka ndinogara ndichitsvaga kuti ndiwane zvimwe zvemhando yepamusoro pariri.
Vaverengi vangu ndine chokwadi chekuti vaizobatsirwa zvakanyanya kubva muruzivo urwu. Ini zvechokwadi ndichabatanidza kudzokera kune ino blog
sekuve iyo yekutanga blog kwandakawana ruzivo kubva.
Great post Douglas. Nemaitiro azvino mukutsvagazve zvemukati wanga uri pamberi peiyo curve uchifunga kuti wakanyora iyi post angangoita makore manomwe apfuura. Ini ndinoona ahrefs ndiyo yakanyanya kunaka mune imwe mhinduro mazuva ano ekutsvaga mazwi makuru.
Zvamazvirokwazvo. Ini handisi kuona kukosha kune vateereri vedu mukuva nekare, zvinyorwa zvisirizvo pasaiti. Ndinoedza kuchengeta vakawanda sezvandinogona kuti vafambirane nenguva. Hapana chandakanzwa kunze kwezvinhu zvikuru nezve ahrefs!